Daawo Sawirada:Aas Heer Qaran ah oo shalay loo sameeyay Askari Turki ah oo dhawaan lagu dilay magalada Muqdisho. - jornalizem
Daawo Sawirada:Aas Heer Qaran ah oo shalay loo sameeyay Askari Turki ah oo dhawaan lagu dilay magalada Muqdisho.
Waxaa shalay Magaalada Amasya ee Dalka Turkiga Aas Heer qaran loogu sameeyay Askari katirsanaa Ciidamada Turkiga oo ku geeriyooday Weerar Al-Shabaab labo maalin kahor ku qaadeen Xarunta Shaqaalaha Turkiga ka dagnaayeen Magaalada Muqdisho.
Aaska heerka qaran ee maanta loo sameeyay Sinan Yılmaz oo ahaa 42 sano jir kana mid ahaa ciidamada illaalada khaaska ah ee dalkaasi Turkiga ayaa waxaa kasoo qeyb galay Masuuliyiin sar sare oo u dhashay Dalka Turkiga iyo ehelada Marxuunka geeriyooday.
Askarigan ku geeriyooday Weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Xarunta ay dagnaayeen Shaqaalaha Turkiga ayaa shalay laga dajiyay Dalkaasi iyadoona isla Maantaba lagu aasay Magaalada Amasya oo ah magaalada uu kasoo jeeday Askarigan dhintay.
Masuliyiinta ka qeyb galay Aaska Askarigan ayaa waxaa a\_kamid ahaa Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Muammer Güler, Duqa magaalada Amasya Abdil Celil Öz sidoo kale waxaa aaska ka qeyb galay Safiirka Soomaaaliya u fadhiya Dalka Turkiga.
Wasiirka Arrmaha Gudaha Dowladda Turkiga oo ka hadlay Xafladda aaska aya asheegay in tani aysan dhaawici doonin xiriirka adag ee ka dhexeeya labada Dowladood, waxaa uu dhankiisa Tacsi u diray muwaadinki Soomaliyeed ee ku geeriyooday iyo sidoo kale soo bogosho deg deg u rajeeyay intii kale ee ku waxyeeloobay qaraxaasi wuxuushnimada leh